जहाँ अहेव र वडाध्यक्षले नै गर्छन् वडा सचिवको काम – Ganatantra Online
जहाँ अहेव र वडाध्यक्षले नै गर्छन् वडा सचिवको काम
बिहिबार, आषाढ २६, २०७६ १९०७४९
देउखुरी, असार २६ । देउखुरीको राजपुर गाँउपालिका वडा नं. २ को वडा कार्यालयका तुलाराम चौधरीले वडा सचिवको रुपमा काम गर्न थालेको पाँच महिना भयो । तर चौधरी आफ्नो काम प्रति अन्यौलमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई कामको कुनै मेसो छैन । काममा मेसो नपाउँनुको कारण हो, चौधरी कुनै वडा सचिव होइन । बेला स्वास्थ्य चौकीका अ.हे.ब चौधरीलाई वडाकै सचिव बनाएको छ ।
यस भन्दा पहिले करारमा वडा सचिव पद सम्हाल्नु भएका आरती भट्टराईको सरुवा भएपछि चौधरी आउनु भएको हो । वडा कार्यालय सचिव बिहिन भएपछि राजपुर गाउँपालिका कार्यपालिकाको बैठकले अ.हे.ब चौधरीलाई वडा सचिवमा नियुक्त गरेको राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले बताउनुभयो । अ.हे.बले सचिवको काम गर्न थालेपछि काममा ढिलासुस्ति हुने गरेको राजपुर गाउँपालिका वडा नं. २ निवासी मञ्जिर यादबले जानकारी दिनुभयो ।
अ.हे.ब चौधरीले आफ्नो काम अर्कै भएको र सचिवमा कुनै अनुभव नभएकाले काममा ढिला हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘मेरो क्षेत्र अर्कै हो तर, अर्को कार्यालयमा काम गर्नुपरेको छ’ चौधरीले भन्नुभयो, ‘सचिवको कामले गर्दा स्वास्थ्य चौकीको अपडेटबाट पनि बञ्चित भएको छु, तर यता वडा सचिवको काम पनि सिक्ने काम भैरहेको छ, जनताको काम सहज रुपमै होस भन्ने उदेश्य रहेको छ ।’
यस्तै राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ५ को वडा कार्यालय पनि करिब ३ महिनादेखि सचिवबिहिन भएको छ । ५ नंं वडाध्यक्ष नरेन्द्रसिंह भण्डारीले आफै वडासचिवको काम गर्दै आईरहनु भएको छ । कार्यालयमा यस भन्दा पहिले राजेशकुमार काँहर सचिव पदमा रहेर काम गर्नुभएको थियो, तर काँहरको सरूवा भएसंगै वडा नं. ५ को कार्यालयमा सचिवविहिन भएको हो । समायोजनमा कोही सचिव उपस्थित नभएको राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रसिंह भण्डारीले बताउनुभयो । ‘वडा कार्यालयको सम्पूर्ण काम मैले आफै गरेको छु, सबै काम आफै गर्नुपरेकोले बाहिर अनुगमन, गोष्ठीमा पनि जान सकिएको छैन’ वडाध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो, ‘सबै काम एक्लैले भ्याउन गाह्रो नै हुँदो रहेछ, कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भैरहेको छ ।’
वडा कार्यालयमा कर्मचारीहरु नहुँदा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्ने गरेको पाईएको छ । ‘प्राविधिक पद शुरूदेखी खाली भएपनि जसो तसो काम चलेकै थियो, तर सचिव नै नभएपछि धेरै काम रोकिन्छ, बन्ने कामपनि ढिला सुस्ति हुन्छ, स्थानियको भनाई सहँदै आईरहेका छौँ’ वडाध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो । पटक पटक सम्बन्धित निकायमा पहल गरेपनि बेवास्ता गरिरहेको अध्यक्ष भण्डारीले आरोप लगाउनुभयो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले एक जना वडा सचिव खटाईएको बताएपनि वडा कार्यालयमा वडा सचिव उपस्थित छैनन् । यस बिषयमा छानबिन गरिने अध्यक्ष केसीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाको अन्य वडाहरुमा पनि विभिन्न पदका लागि आवस्यक कर्मचारीहरु नहुँदा समस्या भैरहेको उहाँले बताउनुभयो ।